Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Jaaliyadda Germany oo shirkoodii soo gabagabeeyay
Maamulka Jaaliyadda Germany oo shirkoodii soo gabagabeeyay
Waxaa 23/3/2013, magaalada Frankfurt ee dalka Germanyka dhacay shirkii Hawl-wadeenka Jaaliyada Somalida Ogadenia ee dalka Germany.
Shirkan oo lagu doortay maamulka Hay’ada Samafalka eeGermany ayaa lagaga hadlay waxqabadka JaaliyadaGermany labadii sano ee lasoo dhaafay isla markaana lagu dajiyay ajandaha JaaliyadaGermany ee labada sano ee soo socota.
Waxaa shirkan kasoo qaybgalay dhamaan Hawl-wadeenada Jaaliyada Germany iyo Hay’ adaha kaladuwan ee Jaaliyada hoos yimaada sida Midawga Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenia (OYSU), Ururka Hooyooyinka Ogadenia iyo Hay’ada Samafalka Ogadenia shirkan oo kusoo gaba gaboobay jawi aad ufiican oo farxadi ku dheehantahay, waxayna dhamaan xubnihii madasha shirka kasoo qaybgalay hoosta kaxariiqeen siday udardar galin lahaayeen hawlaha halganka iyo abaabulka bulshada isla markaana uxoojin lahaayeen hay’daha lafdhabarka u,ah waxqabadka jaaliyada Germany.
Dhanka kale waxaa madasha shirka siwanaagsan ooga sooqayb galay masuuliin sarsare oo kamid ah JWXO, waxayn aad oogu booriyeen talaabada ay JaaliyadaGermanyutalaabsatay iyo dardar galainta geedi socodka hawlaha halganka. Masuuliintan oo shirka kasoo jeediyay warbixino dhaxalgal ah ooy kaga warameen xaalada Halganka Ogadenia. Waxaa xusid mudan inay Jaaliyada Somalida Ogadenia ee dalkaGermanyay kamid tahay jaaliyadaha halbawlaha u,ah Halganka Ogadenia ee safka hore kaga jira waxqabadka iyo abaabulka wanaagsan iyadoo jaaliyadu ay maanta marayso marxalad aad uwanaagsan.